मेरो प्रतिस्पर्धी नै छैनन् – Rajdhani Daily
मेरो प्रतिस्पर्धी नै छैनन्
एमाले अध्यक्ष तथा उम्मेदवार झापा–५
वाम गठबन्धनपछि राजनीतिक चिन्ताको एउटा अध्याय समाप्त भएको हो ?
निश्चित रूपमा हो । यो समयको माग हो, जुन पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । यो गठबन्धनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । यो गठबन्धन सुझबुझ र धेरै छलफलपछि भएको हो । देशलाई विकास चाहिएको छ । विकासको राहत अगाडि बड्न सकेन । किनभने लामो समय संसद् अंक गणितीय खेलमा अघि बढ्योे । विवेकको कुरा भएन । स्वार्थको मात्र काम भयो । यो रोक्न गठबन्धनले सहयोग पु¥याउँछ । हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रयास गरेका छौं ।
चुनावलगत्तै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्ने भन्नुभएको छ । तर सोचेजस्तो चुनावी परिणाम आएन भने के हुन्छ ?
काल्पनिक प्रश्न नगरौं । यो प्रश्न नै गलत छ । अहिले भूकम्प आयो भने के हुन्छ ? तर अहिले आएको छैन र विश्वास गरौं आउँदैन । सोचेजस्तो परिणाम नआउनेमा हामी सबै ढुक्क छौं । यो समयको माग हो । यसैले अनिष्ट नसोचौं ।
वाम गठबन्धनको विषयमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ नि ?
यो हल्लाखोरहरूको कुरा हो । चमडी जोगाउने र केही नगर्नेहरूको कुरा हो । हामी लोकतन्त्रका जन्मदाता हौं । हामीले मूल्य मान्यता जोगाएर आएका छौं । यसैले हामीलाई लोकतन्त्र प्यारो छ ।
तपाईंहरूको घोषणापत्रबारे पनि अनेक शंका व्यक्त भइरहेको छ नि ?
आफ्नै घोषणापत्र अरूलाई भाडामा खोजेर लेख्न लगाउने कांग्रेसले हाम्रो घोषणापत्र पढेको छैन । शेरबहादुरले एमालेको घोषणापत्र पढ्नुभएको छैन । उहाँहरूले घोषणापत्र पढेको भए सप्रिनु हुन्थ्यो । उहाँहरूलाई लोभ थाहा छ, स्वार्थ, पद र लाभ मात्र थाहा छ । देशको हालत थाहा छैन ।
एमालेले मुलुकभर कति सिट ल्याउला ?
आरामले बहुमत ल्याउँछ । अरू हिसाब मैले गरेको छैन । कहीं कतै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन ।
घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको गन्ध त कतै पाइएन नि ?
किन चाहियो ? केका लागि चाहियो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा कांग्रेसले जतिसुकै ठूलो हल्ला फैलाए पनि अमेरिकालगायतमा यही व्यवस्था छ । के ती सबै कम्युनिस्ट मुलुक हुन् ? किन कांग्रेसले समाजवादको ढोल पिटेर हिँडिरहेको छ ? समाजवाद कांग्रेसले मान्छ कि मान्दैन ? फेद न टुप्पाको बकवास गरेर हिँड्नु हँुदैन ।
भारतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छैनन् ? मनमोहन सिंहले दुईपटक प्रधानमन्त्री खानुभयो । उहाँसँग बहुमत पनि थिएन, जोडजामकै सरकार थियो । कांग्रेससँग बहुमत पनि थिएन । तर पनि स्थायित्व हँुदोरहेछ । स्थायित्वको परिभाषा अलिकति फरक हो । सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्य कांग्रेसले सोसलिज्मको विरोध गरिरहेको छ । देउवा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्यबाट किन राजीनामा गर्नुहुन्न ? जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । कांग्रेसलाई अहिले सिद्धान्तको सम्झना पनि छैन ।
अब सांसद् खरिद बिक्रीको परम्पराको अन्त्य हुन्छ त ?
अब हिजोको भन्दा धेरै परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो प्रयास त्यस दिशातर्फ लक्षित हो । हेर्दै जानुहोला, परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउनेछन् ।
तपाईंहरूको गठबन्धनको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना कति छ ?
अवश्य हुन्छ । कुनै पनि निरपेक्ष हुँदैन । सापेक्ष हुन्छ । हामीले अरू कसैलाई हराउन मोर्चाबन्दी गरेका होइनौं । यतिखेर दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादीहरू देशलाई अप्ठेरो पार्न मोर्चाबन्दीमा लागेकाले पनि यो गठबन्धन सापेक्ष छ ।
वाम गठबन्धनको प्रस्ताव पहिले कसले अघि सारेको हो ?
किन हानथाप गर्नु ? प्रचण्ड र म दुवैजनाले गरेका हौं ।
निर्वाचनमा तपार्इंको मुख्य प्रतिस्पर्धी को हो ?
मेरो प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैनन् । नेपाली कांग्रेसको पनि उम्मेदवारी परेको सुनेको छु । तर मेरो जित निश्चित छ । मेरो क्षेत्रमा अरू कोको उम्मेदवार छन् ? मलाई थाहा छैन ।
पहिला पनि त्यसै भनेर हार्नुभयो नि ?
त्यो बेलामा देशमै ग्रहण लागेको समय थियो । म बिरामी थिएँ ।
प्रस्तुति : टीकाराम नेती